Romafo 15 NA-TWI - Ɛsɛ sɛ yɛn a yɛyɛ den wɔ gyidi - Bible Gateway
Romafo 14Romafo 16
Romafo 15 Nkwa Asem (NA-TWI)
15 Ɛsɛ sɛ yɛn a yɛyɛ den wɔ gyidi mu no tumi boa wɔn a wɔn gyidi sua no na wɔatumi agyina wɔn haw ano. Ɛnsɛ sɛ yɛyɛ biribi de ma yɛn ho. 2 Mmom, ɛsɛ sɛ yɛn mu biara boa ne nua wɔ ne yiyedi mu sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛhyɛ ne gyidi den. 3 Efisɛ, Kristo anyɛ amma ne ho. Sɛnea Kyerɛwsɛm no ka se, “Nsɛm a wɔkae bere a wɔrebɔ wo adapaa no aba me so.” 4 Biribiara a wɔakyerɛw wɔ Kyerɛwsɛm no mu no, wɔakyerɛw de kyerɛkyerɛ yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a yɛnam boasetɔ, nkuranhyɛ a Kyerɛwsɛm no de ma yɛn no so benya anidaso.